China VHP Sterilization Manufacturer na Nweta | Shinva
Maka akụrụngwa tupu ijighachi, mechie, na-ehicha kwa ụbọchị. na nbudata ngwa ngwa nke nje ndu.
Disinfector nwere ike imecha disinfection ma ọ bụ sterilaiz na ikuku na ihe ndị dị n'elu oghere. Ogo ọgwụ disinfecting na microbe ahụ nwere ike iru ogo ụlọ. Nchedo, ọgụgụ isi dị elu, adaba.
Ihe disinfector hydrogen peroxide disinfector na ebe ruru 500m3.
VHP disinfector (ọkpọkọ) bụ ụdị obere ngwaọrụ mkpanaka, enwere ike ijikọ ya na oghere site na sooks kwesịrị ekwesị na interface nwere nchekwa iji rụzuo nsị ma ọ bụ ọrụ disinfection. , carbon dioxide incubator, obere ifriizi draya, wdg.
Omume zuru oke nke disinfection / sterilization
Ọrụ nke ọgwụ disinfection na sterịizin nke akụrụngwa ga-eme ka nje, nje na-atụ ụmụ nje ndị a anwụ wee nyefee 6-log bio-decontamination.
Igwe gas nke H2O2 dakọtara na ihe a ga-ebute nje. Ma ọ dịghị ihe ọjọọ dị n'elu ụlọ na akụrụngwa.
Enweghị ihe mmapụta na H2O2, Alụlụụ na-enye ọrụ arụmọrụ-nke nwere njikwa okirikiri pụrụ iche.
Njikwa ikuku na IPAD. Onye ọrụ nwere ike iguzo n'èzí ohere iji nyochaa ma rụọ ọrụ akụrụngwa iji kpuchido onye ọrụ ahụ.
Ozugbo ihe na-adịghị mma mere, nchọpụta ọgụgụ isi nke mgbatị VHP na mbara igwe nwere ike ime ka ịdọ aka ná ntị ahụ iji hụ na ndị mmadụ na anụmanụ ga-anọ na gburugburu nchekwa.
Ngwaọrụ na-abịa na ọrụ nke ire ere nke VHP na ventilashion iji hụ na enwere ike ịchịkwa ịta hydrogen peroxide na mpaghara ahụ n'ime 2PPm na njedebe nke disinfection ma ọ bụ nwoke ịga ụlọ ọgwụ.
Akwa arụmọrụ nke disinfection na nwoke ịga ụlọ ọgwụ
Usoro nke disinfection ma ọ bụ sterilization nwere ike gbanwee na ọnụ ụlọ. Ọ ga-abụ awa 4-6 iji mezue disinfection / sterilization na ime ụlọ dị iche.
Ọgụgụ isi, dị mfe ịrụ ọrụ
Ngwaọrụ ahụ na-eji arụ ọrụ ntanetị aka nke onye ọrụ mgbagha mmemme na-achịkwa. Ọ na-agbanwe agbanwe ịtọ ntọala. Dabere na tupu-setịpụrụ, akụrụngwa nwere ike ịgba ọsọ disinfection ma ọ bụ sterilization na-akpaghị aka na-enweghị enyemaka mmadụ na usoro niile na ụlọ okpomọkụ na ọnọdụ nrụgide. Enwere ike iwepu ya ma ọ bụ kpochapụ ya n'otu n'otu maka mpaghara ọ bụla nwere ike imechi.
Adaba maka nlekota mmetụta
E nwere ihe ngosi kemịkal na nke ndu nke ndị ọrụ ahụike steeti nyere nkwado maka nsonaazụ nke ọgwụ VHP. Onye ọrụ nwere ike mgbe niile nyochaa nwoke ịga ụlọ ọgwụ mmetụta.
Nke gara aga: Enwe onu
Osote: WAS Series Ampoule Mmiri Sterilizer
BWS-T usoro ọwara na-aga n'ihu washer